ခွေးများတွင်အော်တိုမွန်ရောဂါ Dogs World
ခွေးများအတွက် Autoimmune ရောဂါ
Viviana Saldarriaga | | ရောဂါများ, အထွေထွေခွေးများ
ပထမအဆင့်အနေနှင့်သိရန်အရေးကြီးသည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ် တိရိစ္ဆာန်များ၏သက်ရှိလူသားများတွင်ကဲ့သို့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအနာတရဖြစ်စေသည့်အရာ ၀ တ္ထုများကို ၀ င်ရောက်ကာကွယ်ခြင်းမှကာကွယ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရမည်။
Autoimmune ရောဂါများသည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ဖန်တီးခြင်းကိုရပ်တန့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်သည် ပodိ ထိုထိုးဖောက် ၀ တ္ထုများသို့မဟုတ်ဘက်တီးရီးယားများကိုတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဆဲလ်များကိုစတင်တိုက်ခိုက်ရန်အလိုအလျောက်ပantibိပစ္စည်းများကိုစတင်ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်အဘယ်ကြောင့် autoimmune ရောဂါများပေါ်ပေါက်ပါတယ်? ဒီ autoantibodies ၏အသွင်အပြင်ကိုမျက်နှာသာသောတိရစ္ဆာန်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပေါ်ပေါက်သောလုပ်ရပ်လေးမျိုးရှိပါတယ်။
တစ် ဦး autoantibody တိကျတဲ့ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုသို့မဟုတ် system ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့အခါ။
ပantibိပစ္စည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေ့ရှိအမျိုးမျိုးသောပရိုတိန်းပစ်မှတ်ထားသောအခါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့်ပျံ့နှံ့သောအခါသူတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသော autoimmune ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ lupus erimatous ။
autoimmune ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးယေဘူယျအားဖြင့်စနစ်တွင်အားနည်းချက်များရှိသည့်အခါ။ ဥပမာ၊ အချို့သောခွေးများခံစားရသောအသည်းရောဂါတွင်သွေးရည်ကြည်အင်ဇိုင်းမ်ထုတ်လုပ်မှုကိုပိတ်ပင်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အချို့ကိုသိရန်လည်းအရေးကြီးသည် အသုံးအများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေ ငါတို့တိရိစ္ဆာန်များရောဂါမကူးမီတင်ပြစေခြင်းငှါ,
၀ မ်းပျက် ၀ မ်းနည်းခြင်း၊
ကြွက်သားထုများ၊ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ခြေထောက်များနှင့်လမ်းလျှောက်သောအခါအားနည်းချက်များစွာတို့ပါ ၀ င်သည်
နား၊ ခြေထောက်၊ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းတွင်အနာများ။
ဤရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ဂရုတစိုက်ဆန်းစစ်ရန်နှင့်၎င်းတွင်ဤ autoimmune ရောဂါရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်အထူးကျွမ်းကျင်သူထံသို့အမြန်ဆုံးသွားရန်အရေးကြီးသည်။ အရေးကြီးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ရောဂါများ » ခွေးများအတွက် Autoimmune ရောဂါ
မာရီယာ del carmen fuentes cano ဟုသူကပြောသည်
ငါ Oaxaca မှာနေပြီးသူမနေမကောင်းဖြစ်လို့သူမရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကသူမကိုမလိုချင်တော့တဲ့ခွေးမွေးစားလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ရဲရင့်တဲ့နာမည်၊ သူမငါးလလောက်ရှိပြီ၊ သူမအားနည်းနေတယ်၊ ​​သူမမှာရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်၊ သူ့မျက်လုံးတွေ၊ သင်လမ်းလျှောက်လို့မရဘူး၊ သူမအရမ်းအားနည်းနေတယ်။ ရွေ့လျားခဲသည်။ ဒါဟာသူမနဲ့ကျွန်မရဲ့ဒုတိယနေ့ဖြစ်ပြီးသူမကို VET ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့်အခြားထင်မြင်ချက်တစ်ခုလိုချင်ပါတယ်။ ကောင်းစွာစားပြီးရေအများကြီးသောက်ပါ။
María del carmen fuentes cano အားပြန်ပြောပါ
ဒီ autoimmune ရောဂါများအတွက်ကုသမှုရှိပါတယ်, ကဘာပေါ်မူတည်ပါဘူး ???
ငါဒီရောဂါကြောင့်ငါ့ခွေးပျောက်သွားတယ်၊ သူတို့ပြောတာတွေအရသူမနဲ့အတူရှိနေပြီးသူမကိုက်နေတဲ့သွေးမှနိုးထလာတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သွေးစစ်တာကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာကိုဖြစ်စေတယ်၊ အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး၎င်းသည်ပြန်လည်ဆဲလ်များပြားလာပြီးသွေးဆဲလ်များကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးသည်။ ငါကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်ဤပြန်လာခြင်းမရှိသေးသောအရာတစ်ခုခုသည်အချိန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလျှင်, ငါနိုးပါ, သင်တန်းနိုးနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါ။